musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Brand New Sports Mota yepasi pe $30,000
Iine simba rakawanda rebhiza uye torque, yakagadziridzwa mukati nekunze uye yekutanga Mugadziri Yakakurudzirwa Retail Mutengo (MSRP) wemadhora zviuru makumi maviri nenomwe nemazana manomwe chete, iyo-nyowani 27,700 GR2022 inotengeswa kuti inakidze.
Kusvika pazvitoro zveToyota muna Zvita uye inowanikwa mumagiredhi maviri, GR86 uye GR86 Premium, chizvarwa chitsva chemotokari yemutyairi weToyota chinounza kunakidzwa kwemotokari yemitambo, zvese zvine injini hombe ye2.4 litres inopa simba rinoda kusvika 18% uye torque yakawanda 11%.
Iyo GR86 Premium giredhi inokwira pastandard 18-inch, 10-spoke black aluminum alloy mavhiri ane Michelin Pilot Sport 4® matayi uye hombe duckbill spoiler kumashure. Nechemukati, dema uye sirivheri inosimudzira matanhatu-nzira inogadzirika zvigaro zvepamberi zvinoratidzira maviri-level kudziyisa uye perforated UltraSuede upholstery ine matehwe epadivi mabolsters. Mazwi matema nesirivheri anoenderera mberi kusvika kune vhiri reganda, chinja bhutsu uye ruoko brake. Iyo itsva 8-inch touchscreen multimedia system ine masere-speakers inounza kubatana uye tunes kune vatyairi.
Iyo GR86 giredhi inogara pa 17-inch, 10-yakataura muchina-yekupedzisira aruminiyamu alloy mavhiri akaputirwa mumatai eMichelin Primacy HP®. Mamiriro emukati anosanganisira nhanhatu-nzira inogadziriswa nhema G-embossed jira rine sport machira epadivi mabolsters ane textured vinyl uye sport fabric trim padash, magonhi uye chidhiraivho. Iyo itsva 8-inch touchscreen multimedia system ine matanhatu-speakers inouya yakajairwa.
Inowanikwa mune sarudzo yebhunu kana paddle yakachinjika otomatiki kutapurirana, inouya mune sarudzo yemavara manomwe ekunze: Track bRED, Halo White, Sirivha Sirivha, Pavement Grey, Raven Nhema uye Neptune kana Trueno Blue. Chizvarwa chitsva chinoratidzawo kushanduka kwayo kuGazoo Racing lineup ine itsva, angular GR86 logo yakabatanidzwa neToyota's GR badge. Models dziri kutarisirwa kusvika pazvitoro zveToyota muna Zvita.